Semalt - SEO Yekusimudzira Simba
Semalt nhasi, ndiyo yakakwana mhinduro yekusimudzira masosi muGoogle yekutsvaga injini. Masevhisi edu anosanganisira zvinopfuura kungoona SEO optimization kuburikidza neanozivikanwa maturusi uye maitiro, isu takagadzira seti isina kumbobvira matanho ekubudirira kuita chero basa rekutengesa. Mune mamwe mazwi, Semalt idhijitari yekushambadzira makumi emakumi emakore ane ruzivo mukusimudzirwa kweSEO.
Masevhisi edu aishandiswa nevaridzi veanopfuura mamirioni masaiti. Iyo kambani inoshandisa timu yakakura yevanyanzvi, kuendesa hunyanzvi hwakasiyana-siyana: SEO nyanzvi, IT-nyanzvi, vatengesi vevatengesi, vashanduri vewebhu, vanyori vekunyora, nyanzvi dzemitauro, uye kunyange masters eopikicha. Izvo zviri pachena kuti zvinhu zvese zvakanyanyisa zvakanyanya, saka, maitiro ebhizinesi rako anoenderana zvakananga nekubatana naSemalt.
Chii chinonzi SEO
Kuti unzwisise nheyo dzesevhisi yedu, unofanirwa kuve nepfungwa yekutanga yezvinhu zve SEO uye mashandiro avinoita. Ngationgororei zvakakwirira. Yekutsva Injini yekutsvaga ndeye seti yezviyero zvekuvandudza nzvimbo yewebsite mune yekutsvaga injini kuburikidza nemakiyi. Chinangwa chekutanga chekusimudzira kweSEO ndiko kukwezva vatengi kune saiti kubva kune injini dzekutsvaga. Basa rekutanga rekusimudzira kutsvaga ndere kuburitsa zvemukati zvemhando yepamusoro kuita kuti webhusaiti isvike nzvimbo yepamusoro muye injini yekutsvaga.
SEO optimization inotarisana nekuwedzera saiti traffic, ndiko kuti, kuwedzera huwandu hwevanhu vanoshanyira webhusaiti pane chimwe chikamu chenguva. Nzvimbo yenzvimbo mune yekutsvaga injini kune imwe yakakosha zvikumbiro uye huwandu hwemotokari inomiririra kuonekwa kwenzvimbo. Injini dzekutsvaga dzinoshanda huwandu hukuru hwepameter. Zvichakadaro, kutsvaga kweinjini yekutsvaga kunoitwa nezvinhu zvemukati uye zvekunze.
Izvo zvemukati zvekumisikidzwa zvinhu zviri kushanda zvakananga kune iye muridzi webhusaiti. Kusimudzira, mune ino kesi, zvinoreva kuvandudza hunyanzvi hwekushandisa, kugadzira chimiro chine hunyanzvi, kuisa zvindori zvemukati, kugadzirira zvinobatsira uye zvemukati zvemukati.
Zvinhu zvekunze zvinzvimbo zvinosimudzira saiti kuburikidza nezvimwe zviwanikwa. Nhanho huru ndeyokuwana zvinongedzo kubva kunze zvinozotungamira kumapeji ako ewebhu.
Zvinhu zvekunze zvinzvimbo zvinosimudzira saiti kuburikidza nezvimwe zviwanikwa. Nhanho yekutanga ndeye kuwana zvinongedzo kubva kunze zvinozotungamira kumapeji ako ewebhu. Basa reSemalt ndere kutora zvinhu zvese mu account uye kutsvaga seti yezvakakodzera zviito kuburikidza nehunyanzvi maturusi. Kupfuurirazve, kuoma kweizvi zviito kuchatungamira nzvimbo kune zvinzvimbo zvepamusoro. Vaya vanoda kubudirira mubhizinesi havawanzo kunzwisiswa kwakakwana kweSEO. Mhinduro yakakodzera kwavari ingadai ichitora mukana weemaitiro eSemalt, kushanda kwayo kunosimbiswa nezvinoonekwa.
Nzvimbo huru dzehunyanzvi hwedu dzinosanganisira:
kutsvaga injini yekugadzirisa;
vhidhiyo yekusimudzira yebhizinesi rako;
Kusimudzira masosi, Semalt akagadzira nzira dzakasiyana siyana dzekufanoona zvigadziriro zvisati zvaiswa mune bhizinesi. Vast chiitiko mune SEO indasitiri uye kushambadzira ruzivo kwakabvumira iyo kambani kuve mugadziri wemazano SEO mhinduro, senge AutoSEO, FullSEO. Ongorora zvakanakira pamishandirapamwe iyi.
Kupfupisa kukosha kweiyi mushandirapamwe tinokwanisa kuratidza kukosha kwakanyanya kunogona kutora kubva mairi:
kusarudza zvakanyanya akakosha mazwi;
webhusaiti kukanganisa kwekugadzirisa;
kugadzira mareferensi kune inoenderana ne-niche zvine mawebhusayithi;
Iyo AutoSEO maitiro anoitwa seinotevera: Kamwe yakanyoreswa, saiti inoongorora ichapa pfupi pfupiso pane webhusaiti mamiriro zvichitevedzera SEO zviyero. Iyi ruzivo, zvakare, ichabatsira kuvandudza nzvimbo yako kuGoogle. Wako maneja maneja, pamwe neye SEO mubatsiri, achaita Ongororo yakakwana yewebsite yako uye achaita chinyorwa chekutarisa zvikanganiso chinofanira kugadziriswa. SEO injinjini inogadza yakakodzera mazwi kuitira kuti isimudzire webhusaiti traffic.
Yepamberi tekinoroji inowanzoisa internet zvinongedzo nezvakakodzera zvemukati mune akasiyana online zviwanikwa. Mhedzisiro yakanaka inowanikwa nekubatanidza zvese zvinongedzo mune zvega zvemukati. Semalt ine angangoita zviuru makumi manomwe emhando yepamusoro yemasaiti pane dzakawanda zvinyorwa zvinogovaniswa maererano nezera rezita. Isu tinogara tichitarisa zvinongedzo uye chinzvimbo chadzo muminjini yekutsvaga. Mhando dzehubatanidza dzinoiswa mune inotevera chiyero:
40 muzana - anchor link;
Makumi mashanu muzana - yakajairika maratidziro;
10 muzana - chiratidzo chekuzivikanwa.
Mushure mekupa FTP kana CMS manejimendi yekubatisa panhare, Semalt mainjiniya vanochinja zvakatemwa, iyo yakaratidzwa mushumo webhusaiti. Shanduko dzakapedzwa pane yako webhusaiti nekuda kwekukurudzira kwataongorora uye SEO vapi vamazano vanovimbisa inobereka AutoSEO mushandirapamwe. Semalt inoitisa yezuva nezuva kusimudzira ine yakanyorwa pamusoro mazwi ekukuchengetedza iwe uine ruzivo nezve SEO mushandirapamwe kufambira mberi.
Maneja waSemalt anogara achiwongorora maitiro e AutoSEO, achipa muridzi wewebsite ne e-mail kana yemukati yekuzivisa makero. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kusimudzira mitengo pamapurojekiti ese madhora 99 pamwedzi. Munguva yekuedzwa, iyo AutoSEO yekushambadzira yeimwe purojekiti inodhura $ 0.99.
FullSEO inoratidzirwa seti yemukati uye yekunze webhusaiti maitiro ayo anounza kubudirira kwakanaka munguva ine nguva pfupi. Nyanzvi dzichaita zvese zvemukati uye zvekunze optimization, kukanganisa kwakaringana, uye kunyora zvinyorwa maererano neSEO zvakatemwa. Nekuda kweizvozvo, bhizinesi rako repamhepo raigona kufambira mberi mumwedzi mishoma. Nemushandirapamwe weFSSEO , huwandu hwemari yemari huchawedzera zvakanyanya, saka kudzoka pakudyara kunosvika pakuva 700%.
Kuvhura mushandirapamwe weFSSEO kunoita kuti utore chinzvimbo chepamusoro mumusika wemusika, uchikonesa vakwikwidzi vako kushamisika. Iyi webhu-yekuvandudza system ichaunza zvinobatsira iwe kwauri ipapo. Semalt achaita kuti iwe uonekwe kune vangangove vatengi.
Mushure mekunyoreswa, yedu yekuongorora system inopa pfupi pfupiso pane yewebhu webhusaiti inotevera SEO zviyenzi zviyero. Zvakare, maneja wako, achiperekedzwa neiye SEO nyanzvi, anozoita yakazara semantic kuongororwa kwewebsite yako, kugadzirisa kwayo, kusarudza iyo semantic yakakosha.
Ivo vachiri kugadzira manyorerwo embugs iyo inofanirwa kururamisa, SEO kuvandudza inosarudza traffic-inowedzera mazwi. Yako saiti yepaiti inotsungirira yakakwana mukati mekunze nezve matanho ese akakurudzirwa muFSSEO. Mushure mekutambira FTP uye CMS manejimendi yekubatika paseji, vashandisi vedu vanoita shanduko dzakarongedzwa muchidimbu pane webhusaiti yako, vachiponesa kuzadzikiswa kwemaitiro ako ezve FullSEO
Kugadziriswa kwekunze: edu SEO nyanzvi dzinotanga nekuisa zvigadzirwa pane niche zvakapamhidzirwa zviwanikwa zvewebhu, zvakafanira kune yako saiti zvemukati. MaInternet akaisikidzwa anochinjaniswa muzvinhu zvega, saka, anoitisa kuti iwe uwane zvakaringana zviwanikwa. Iyo kambani ine isingaverengeki huwandu hwakanakisa hushamwari-nzvimbo pamhiri akasiyana niches, ayo zvine chinangwa yakarongedzwa zvinoenderana nehurefu hwekuvapo uye neGoogle Trust Rank.
Chivakwa chekuvaka chinoitwa nguva nenguva nekuda kwehuwandu:
Makumi gumi muzana - trademark label viungo.
Wako wega maneja anodzora mushe mushandirapamwe wako sechikamu chechirongwa, anovandudza chinzvimbo chinongedzo chemashoko akakurudzirwa, achikupa iwe chaiwo mishumo, kuzivisa nezve SEO yako mushandirapamwe kukura. Anomiririra anogara achibata newe masikati nousiku.
Kana iwe ukamisa SEO kusimudzirwa, zvese backlink zvichabviswa, uye Google ichavabvisa kubva mudura re data mukati memwedzi yakati wandei. Kunyangwe ikakwaniswa masosi yaizodonha inodonha, chero zvakadaro, ivo vanozove vakanyanya kudarika kupfuura vasati vaita SEO. Iko SEO kusimudzirwa kwewebsite yega yega inoda nzira yega yega. Mutengo unozoitika uchapihwa mushure mekunge nyanzvi yeSEO yaongorora yako saiti mukubatsira nemaneja waSemalt.
Semalt inoitisa zvakare Webhu Analytics. Iyo yakasarudzika nzira yekuongorora inozivisa mikana mitsva yekutarisa musika. Iyo zvechokwadi inoita kuti vashandisi vatevedze zvinzvimbo zvevanokwikwidza nekupa ruzivo rwebhizinesi rekuongorora. Paunenge uchiongorora mamiriro ewebhusaiti, inokugonesa kunyora chiratidzo chakajeka chebhizimusi rako mukati memusika. Ruzivo rwekuongorora runoita kuti zvikwanisike kusimbisa zvakakosha mune yako basa rinouya uye uzadze saiti yako nezvakadzika zvakaiswa pane akakosha mazwi, kutenga / kutengeserana zvinongedzo, uye akakosha mazwi.
Semalt Analytics inokuudza chokwadi chose pamusoro peaikwikwidza chinzvimbo pamusika. Kushandiswa kwakanaka kwe data iyi kunotendera iwe kuti ubudirire mukutsvaga kwekutsvagisa, mhanyisa kambani yako yekushambadzira. Ruzivo rwakagamuchirwa kubva kuongororo yekutengeserana runofumura mikana mitsva yezvinhu & mabasa ekugoverwa, nekuwedzera inovaka mukurumbira mumatunhu akasiyana siyana, vachifunga zvese zvematunhu.
Analytics inogona kupfupikiswa se:
Keywords chinzvimbo kuongororwa;
Mashandiro eSemalt Analytics
Paunongosaina webhusaiti yedu, iwe unotanga kuita nzira yekuunganidza data nekuwana mushumo wakajeka unoratidza yako webhusaiti nzvimbo uye chinzvimbo cheavo vanokwikwidza. Chirevo ichi chinosanganisirawo mirayiridzo pakuvaka webhusaiti zvinoenderana neye SEO maitiro.
Vaya vanotova neaccount vanogona kuwedzera imwe webhusaiti kune imwe kabati, uye ichafanana yakaongororwa nehurongwa. Panguva iyo saiti iri kuongororwa, yedu system inopa kutengesa mazwi makuru zvichibva pane data rakatorwa kubva kuongororo. Aya mazwi makuru anokanganisa kuwedzera kwevanopinda saiti. Iwe unogona kuwedzera kana kudzima mamwe mazwi nekutanga.
Isu tinoongorora mamiriro ewebhusaiti uye tinotevedzera kufambira mberi kwavo kwemaawa makumi maviri nemana pazuva. Uyezve, tinotora ruzivo nezve vakwikwidzi vako. Semalt nguva nenguva inogadzirisa yako webhusaiti nzvimbo, nekudaro ichikupa iyo yekupedzisira gedhi yekutarisa iyo webhusaiti nzvimbo online chero iwe paunoda. Iwe unogona nenzira imwechete kushandisa iyo Yekushandisa Programming Interface (API). Izvi zvakanyatsokodzera nekuti data racho rinowirirana pachako, zvichiita kuti vashandisi vatarise ruzivo rwakakwidziridzwa. Wona inogara yakagadziriswa analytics data pane chero sarudzo yaunosarudza.
Mitengo ye Analytics inoenderana nesero rakasarudzwa, tarisa edu emitengo zvikamu pazasi:
STANDARD - madhora makumi matanhatu nemanomwe pamwedzi (mazana matatu emakiyi, mapurojekiti matatu, nhoroondo yemwedzi mitatu);
PROFESSIONAL - madhora 99 pamwedzi (1 000 mazwi akakosha, gumi mapurojekiti, 1-gore chinzvimbo chinzvimbo);
PREMIUM - madhora makumi maviri nemana emadhora pamwedzi (zviuru gumi zvemazana, mapurojekiti asina kuenzana).
Sechikamu cheSEO-kukurudzira chirongwa, kambani yedu inopa inokosha mavhidhiyo ekuitisa vatengi mubhizinesi rako. Tsananguro Vhidhiyo inosanganisira yakatanhamara mifananidzo yezviitiko zvekambani yako iyo inonongedzera kune zvakakosha zvikwaniriso mukubatana newe.
Nyanzvi dzechikwata cheSemalt dzakagadzirirwa kwazvo kune dzakaoma kwazvo mabasa. Ivo vese vanogona kubata hurukuro mumitauro yakasiyana uye kuitisa rubatsiro rwakanaka. Yekuita kweSemalt kunyatsoongororwa kunoonekwa mune yakawanda yakajeka ongororo yevatengi vedu. Kushanda pamwe nesu, mikana yekubudirira iri pedyo nezana zana, pakupedzisira, Semalt ichave yako sosi yemari isingagumi. Kubudirira kwako kunoratidza kukunda kwedu!